အီတလီ ကလပ်တွေ နဲ့ စကားပြောတဲ့ ယူနိုက်တက် ပစ်မှတ် ၊ ကွင်းလယ်လူ ခေါ်မယ်လို့ပြောတဲ့ အာတီတာ၊ တောရက်စ် အတွက် လူထပ်ထုတ်ရဦးမယ့် ဘာစီလိုနာ တို့နဲ့ . . . ယနေ့ အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
အီတလီ ကလပ်တွေ နဲ့ စကားပြောတဲ့ ယူနိုက်တက် ပစ်မှတ် ၊ ကွင်းလယ်လူ ခေါ်မယ်လို့ပြောတဲ့ အာတီတာ၊ တောရက်စ် အတွက် လူထပ်ထုတ်ရဦးမယ့် ဘာစီလိုနာ တို့နဲ့ . . . ယနေ့ အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ
ယူဗင်တပ် က ဇန်နဝါရီမှာ လက်လွှတ်ဖို့ အစီအစဉ် မရှိပေမယ့် အယ်ဗာရို မိုရာတာ ဟာ ဘာစီလိုနာ အသင်းရဲ့ နံပါတ် ၁ ဦးစားပေး တိုက်စစ်ပစ်မှတ် အဖြစ် ဆက်လက် ရှိနေတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ဟာ ကော်တင်ဟို ကို အငှားချ နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ဖာရန်တောရက်စ် ကို စာရင်းသွင်းဖို့ လုံလောက်တဲ့ လစာအချိုးအစားကို မရရှိ သေးဘူးလို့ သိရ ပါတယ် ။
အက်စတွန် ဗီလာ ဟာ ကော်တင်ဟို ဘာစီလိုနာ မှာ ရရှိနေတဲ့ လုပ်ခ လစာရဲ့ ၆၅% ကို ပေးချေ ရမှာ ဖြစ်ပြီး ရာသီ အကုန်မှာ ပေါင် ၃၃ သန်း နဲ့ အပြီးသတ် ဝယ်ယူခွင့် လည်း ပါရှိတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ရဲ့ နယ်သာလန် ကွင်းလယ် ကစားသမားလေး ဖရန်ကီ ဒီယွန် ဟာလည်း ဇန်နဝါရီမှာ အသင်းပြောင်းဖွယ် ရှိနိုင်တာကြောင့် ဥရောပ ထိပ်သီး အသင်းတွေ က မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့် နေကြတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကတော့ တိုက်စစ်မှူး အန်တိုနီ မာရှယ် ကို ရောင်းထုတ် ဖြစ်ခဲ့ပါက အာမက် ဒီရယ်လို ၊ အီလန်ဂါ ( သို့ ) ရှိုတိုင်း တို့ အနက်က တဦးဦး ကို စီနီယာ အသင်းမှာ စာရင်းသွင်း သွားဖို့ စိတ်ကူး ထားတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
စပါး ဟာ ဝုဗ် တောင်ပံ ကစားသမား ထရာအိုရေး ကို ကမ်းလှမ်းဖို့ အတွက် ပြင်ဆင် နေပြီး စာချုပ် သက်တမ်း သိပ်မကျန်တော့တဲ့ စပိန်သား အတွက် ပေါင် သန်း ၂၀ ခန့်သာ ပေးချေ ရနိုင်တယ်လို့ မျှော်လင့်ထားကြောင်း သိရ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် နည်းပြ မီကေး အာတီတာ ကတော့ ကွင်းလယ်မှာ အင်အားလျော့နည်းမှုကို သတိပြုမိကြောင်း နဲ့ ကွင်းလယ်လူသစ် ခေါ်ယူဖို့ စီစဉ်နေကြောင်း အသိပေး ပြောဆိုသွား ခဲ့ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး ၊ နယူးကာဆယ် နဲ့ ဝက်စ်ဟမ်း တို့ဟာ အဲဗာတန် ကနေ ထွက်ခွာလို နေတဲ့ ပြင်သစ် ဘယ်နောက်ခံလူ လူးကပ်စ် ဒင်း ကို အပြိုင် ကမ်းလှမ်း သွားဖွယ် ရှိတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ဝက်ဖိုဒ့် နောက်ခံလူ ဒန်နီ ရိုစ့် ဟာ အသင်း နည်းပြသစ် ရာနီရေးနီ နဲ့ အဆင်မပြေ ဖြစ်နေတာလို့ သိရပြီး နည်းပြကြီး ရဲ့ နည်းစနစ်တွေ ၊ လေ့ကျင့်ခန်း အတွင်း ကြားဖြတ်ဝင်ရောက် ညွှန်ကြားမှုတွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဆင်မပြေမှုတွေ ရှိလာခဲ့တာကြောင့် လန်ဒန် ကလပ် ကနေ ထွက်ခွာဖို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ် ခဲ့တာလို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
စီးရီးအေ ကလပ် ကာဂလီယာလီ ကနေ စာချုပ် ဖျက်သိမ်းကာ ထွက်ခွာ လာတဲ့ ယူရဂွိုင်း ဝါရင့် ခံစစ်မှူးကြီး ဒီယေဂို ဂိုဒင် ကို ဒီယေဂို ကော်စတာ ၊ ဟော့ခ် တို့ ရှိနေတဲ့ ဘရာဇီး အမှတ်ပေး ချန်ပီယံ အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး က ချိတ်ဆက် နေတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
မန်ယူနိုက်တက် ကွင်းလယ်လူဟောင်း ပေါလ် အင့်စ် ကတော့ ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို ဟာ အသင်းရဲ့ အနာဂါတ် မဟုတ်တော့ကြောင်း နဲ့ ရိုနယ်ဒို ကို မူတည်ပြီး တည်ဆောက်ဖို့ အစီအစဉ်တွေ ရှိနေပါက ပြန်လည် စဉ်းစားဖို့ ပြောဆို အကြံပြု သွားခဲ့ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် က စိတ်ဝင်စား နေတယ်လို့ သတင်းထွက် နေတဲ့ ရေးဗားပလိတ် လူငယ် ကစားသမားလေး ဟူလီယံ အယ်ဗာရက်စ် ရဲ့ အေးဂျင့်ဟာ အီတလီ ကို သွားရောက် ခဲ့ပြီး မီလန် ကလပ် ၂ သင်း နဲ့ တွေ့ဆုံ ခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ရိုးမားထံ အငှား ပြောင်းရွှေ့ သွားတဲ့ အာဆင်နယ် လူငယ်လေး မစ်လန်းနိုင်းလ် ဟာ လာမယ့် တနင်္ဂနွေမှာ ကစားမယ့် ယူဗင်တပ် နဲ့ ပွဲမှာ အသင်းသစ် အတွက် စတင် ပါဝင် ကစားပေး နိုင်ဖို့ ရှိနေတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် လူငယ်လေး တွမ်ဇီဘီ ကတော့ နာပိုလီ အသင်းဆီ ရာသီကုန် အထိ အငှားနဲ့ ပြောင်းရွှေ့ သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။ နာပိုလီ ဟာ အငှား ခေါ်ယူခ အဖြစ် ယူရို ၆ သိန်း ပေးချေ ရမှာ ဖြစ်ပြီး ချန်ပီယံလိဂ် ဝင်ခွင့် ရပါက အပို ၂ သိန်း ၊ သတ်မှတ်ပွဲ အရေအတွက် ပြည့်ပါက နောက်ထပ် ၄ သိန်း ထပ်မံ ပေးချေ ရမယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
Previous Article ဂျူဗင်တပ် ဂန္တဝင်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုကို ခံနေခဲ့ရတဲ့ အသင်းဖော်ဟောင်း ရော်နယ်ဒိုဖက်မှ ထောက်ခံအားပေးစကားဆိုလိုက်တဲ့ ဂျူဗင်တပ် အသင်းဖော်ဟောင်
Next Article ပရီးမီးယားလိဂ် ကလပ်တွေရဲ့ အက်ဖ်အေဖလား တတိယအဆင့် ပွဲစဉ်တွေကို ခန့်မှန်းပေးလိုက်တဲ့ မိုက်ကယ်အို၀င်